Azụmaahịa Azụmaahịa: Igodo 4 maka aga nke Ọma | Martech Zone
Tọzdee, Disemba 13, 2016 Tọzdee, Disemba 15, 2016 Douglas Karr
Nhazi onwe ya na-ewe oke iwe ugbu a mana ọ bụ atụmatụ nke nwere ike bụrụ mkparị ma ọ bụrụ na emeghị ya. Ka anyị were ihe atụ kachasị - kedu ka ọ na-adị mgbe ị nwetara ozi email ebe ọ na-emepe, Ezigbo %%Aha mbụ%%Nke ahụ ọ́ bụghị nke kasị njọ? Ọ bụ ezie na nke ahụ bụ ihe atụ doro anya, ihe na-apụtachaghị ìhè bụ izigara ndị obodo gị onyinye na ọdịnaya adịghị mkpa. Nke ahụ chọrọ ntọala dị.
Ọgaranya, ike, hyper-kpọmkwem ezubere iche ahụmahụ na-eme ka ndụ dịkwuo mfe maka ọkụ eletrik na-amụba irè nke ahịa na-emefu maka ụlọ ọrụ. Nke ahụ bụ n'ezie mmeri-mmeri maka onye ọ bụla.
Ihe omuma ihe omuma a site na Mgbasa Ozi MDG na-agabiga na data sitere na Adobe, Aberdeen Group, Adlucent na otutu omumu ndi ozo nke na-achikota isi okwu 4 maka oganihu.
Smart vs. ogbi si eme: Nhazi onwe pụtara ihe karịrị nanị tinyere aha. Mbido nke onwe nwere mmetụta pere mpe na njikọ aka; n'agbanyeghị, ozi dabere na ụfọdụ ọrụ onye ọrụ nwere ọnụego emeghe 2X na ọnụego pịa 3X ma e jiri ya tụnyere ozi ịntanetị dị mma. Muta ka ebumnuche siri ike bu ezigbo igodo iji nweta aka di nma.
Otu echiche nke ndị ahịa: Ndị ahịa na-ekwu na uru dị iche iche nke ịhazi onwe ha dị obere mgbasa ozi / ozi adịghị mkpa, nchọpụta ngwa ngwa nke ngwaahịa / ọrụ ọhụrụ, yana mmekọrịta ịzụ ahịa dị elu. Iji nyefee ahụmịhe ndị a ma jikwa ike ịchọrọ ị chọrọ ọgaranya, na-emelite profaịlụ ndị ahịa mgbe niile. Chọpụta ihe kpatara inwe otu echiche banyere ndị ahịa bụ ntọala maka ihe ịga nke ọma.
Data na usoro: Nhazi na data / sistemụ anaghị enwe njikọ, ha jikọtara isi. N'ime ndị ahịa ahụ na-ekwu na ha anaghị ahazi ọdịnaya, 59% na-ekwu nnukwu ihe mgbochi bụ teknụzụ na 53% na-ekwu na ha enweghị data kwesịrị ekwesị. Nyochaa otu esi etinye ego na nyiwe ziri ezi ma ndị mmadụ nwere ike ịkwụ ụgwọ dị ukwuu.
Nghọta na nchekwa: Ndị mmadụ na-atụ anya na ịhazi onwe ha n'ihi na ha ejighi n'aka etu esi eji data ma chekwaa ya. Ọ bụ ya mere njikwa na nchekwa ji dị oke mkpa. 60fọdụ 88% nke ndị ọrụ ntanetị chọrọ ịma otu weebụsaịtị wepụtara ọdịnaya ahaziri maka ha yana XNUMX% nke ndị na-azụ ahịa na-ahọrọ iji chọpụta otu esi eji data nkeonwe ha. Ghọta otu esi edozi oke nsogbu ndị a.
Iji chọpụta otu esi eme ihe kachasị nke aghụghọ ndị a maka akara gị, lelee Nzọụkwụ 4 iji kpọghee ikike dị adị nke ịre ahịa ahịa.
Tags: ndị ahịa na-elennweta dataNche datanghọta datamdg mgbasa ozikeonwedata nkeonwesecuritynghọta